Nhau - Ndeapi mateki emota ari nyore kuchenesa?
Zvinhu zvakasiyana uye zvivakwa zvemota zvepasi zvine nzira dzakasiyana dzekuwachisa.
Iko kuomesa kwekuwacha kwakasiyanawo, iwo mateki emota izvozvi anowanzo aine izvi zvinhu zvakasiyana: kapeti, matai emota matira, pvc mateki emota uye TPE / TPR mateki emota.
Ngatitsanangurei kuti ndezvipi zvakasiyana panzira yekuwachisa yemameti emota:
Carpet : shopu zhinji yemota ichapa kapeti nemota kana iwe uchiatenga, inokwana mota, uye inotaridzika kunge yakanaka pakutanga, asi mushure memwedzi mishoma, inozosviba zvakanyanya, uye zvakaoma kuchenesa zvakanyanya , haina mvura, uye iwe unofanirwa kumirira pakaoma kuti udzore kumotokari yako, hazvisi nyore kuzviita.
5D PVC Leather tsika mota pasi uriri matai, Yakave yakakurumbira kwemakore, nekuti dehwe rinotaridzika mamota emota akasarudzika, Anofarirwa nevaridzi vemota mumakore apfuura.yakatemwa uye yakasonerwa nemhando dzemota, saka zvakare inokodzera mota uye inogona kuburitsa mune yakaderera MOQ, iri yakangochekwa nemuchina uye yakasonwa nemushandi, fekitori yemotokari yemotokari inogona kuburitsa ese mamodheru emota. Asi iyo PVC yematehwe emota mateki ari nyore kupa imwe inonhuwira kupisa muzhizha kupisa, uye inozoputsika mushure mekuigeza dzimwe nguva. Saka vashoma vanhu vanoishandisa izvozvi.
Rubha mota mateki, mukana wayo mukuru mutengo unodhura, uye unogona kuutema kuti ukwane mota yako, asi chinyorwa ichi hachina kugadzikana nharaunda, uye mushure mekuchishandisa kwemimwe mwedzi, chinotsemuka, chinonamira, chakaomarara, chakapfava, hupfu, isina ruvara, yakaumbwa, inotaridzika kunge yakasviba. Saka isu hatikurudzire kushandisa ino zvinhu yemotokari pasi bonde izvozvi.
Iyo nyowani yekuchengetedza nharaunda zvinhu TPE, TPR anoshandiswa zvakanyanya mumotokari pasi matare. Uye haina hwema pakakwirira tembiricha, inogadziriswazve, anti-slip, inopfeka isingagadzirike, isina mvura hunhu. Nekuti TPE zvinhu hazvidi chero chiwedzero mumiririri.
Uye TPE mateki emota ndeye 3D dhizaini, ine hunyoro pamusoro pekunatsiridza kukakavadzana simba uye rakakomberedza rakakwirira divi rinogona kudzivirira mvura mativi parutivi kuvuza, chengetedza mota mukati. Iko kuremara kwematehwe eTPE emota ndiko kunoda kukudziridza chakuumba kune yega yega mota, zvinotora nguva yakareba uye zvinodhura zvakanyanya kuigadzira. Kana iwe uchikwanisa kuwana mateti emota iwe aunoda mune TPE zvinhu mumusika, usazeze kuodha, iwe zvechokwadi uchautengesa wakanaka kwazvo.
Pamusoro pazvose, iyo TPE uye TPR mota matauro ari nyore kuchenesa uye akakodzera zvakanyanya kumhuri dzine vana, hazvina kukuvadza kune hutano.
Iwe uchachengetedza nguva yekugeza matipi emota eTPE, zvinongoda maminetsi maviri kuti ugeze zvakachena.
TPE mateki emota ndiye akanyanya kuchena machete emota.
Post nguva: Feb-09-2021
Mashandisiro ekushandisa yako mota pasi matai e20 yea ...